Radio Sailung 92.7 MHz प्रचण्डलाई ओलीको सन्देशः शीरमा जनयुद्ध, शरीरमा ५०/५० हुन्न !
प्रचण्डलाई ओलीको सन्देशः शीरमा जनयुद्ध, शरीरमा ५०/५० हुन्न !
काठमाडौं । चैत १३ गते अपरान्ह नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता कार्यदलमा रहेका एमाले नेताहरूलाई बालुवाटारमै भेला गरे ।
उहाँहरूले २०४७ मा माले माक्र्सवादी एकीकरण हुँदा समान संख्या थियो भनिरहनुभएको छ । यस बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो बेला राष्ट्रिय परिषद् कार्यकारी कमिटी थियो त्यहाँ मालेको बहुमत थियो । केन्द्रीय कमिटीमा माक्र्सवादका मनमोहन, भरतमोहन, साहना, सिद्धिलालजस्ता सिनियिर नेताहरू धेरै भएकाले बराबरी गरिएको हो । जिल्ला कमिटीहरू दुई तिहाइ मालेकै नेतृत्वमा बनेका थिए । अनलाइन खबरबाट